A na -akpọ nwanne ọhụrụ Emirates nwere ahụike na South Africa Cemair
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » A na -akpọ nwanne ọhụrụ Emirates nwere ahụike na South Africa Cemair
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • Iwughachi • Akụkọ kacha ọhụrụ na South Africa • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Akụkọ na -agbasa UAE • Akụkọ dị iche iche
Cemair dị na South Africa ugbu a nwere nnukwu nwanne nwoke ahụike na Dubai: Emirates ụgbọ elu
Cemair (5Z) nke South Africa na-arụ ụgbọ elu ndị njem n'ime ụlọ na nke mba ụwa, yana ụgbọ elu ịgba akwụkwọ. Isi ụlọ ọrụ na ọdụ ụgbọelu dị na ọdụ ụgbọ elu Johannesburg OR Tambo International (JNB). Ebe ụgbọ elu gụnyere ọdụ ụgbọ elu Bloemfontein's Bram Fischer (BFN), Cape Town International Airport (CPT), Margate Airport (MGH), Sishen Airport (SIS) na Plettenberg Bay Airport (PBZ). Ụgbọ elu ụgbọ elu ahụ nwere ụgbọ elu iri abụọ, gụnyere ụgbọ elu Bombardier CRJ-20, Bombardier Dash 100 na Beechcraft 8D. A na -ahazi ụgbọ elu na oche oche Economy niile.
Ndị ụgbọ elu Emirates na-akpọ ya ịkwaga ịkwado nkwado ọrụ mgbe ha buliri ọrụ ndị njem na South Africa. Emirates esorola Cemair binye aka n'ahịrị nke ga -emepe njikọ na ebe isii ọzọ na South Africa site n'ọnụ ụzọ ụgbọ elu nke Johannesburg na Cape Town.
Mmekọrịta dị n'etiti Emirates na Cemair gụnyekwara ebe ntụrụndụ ole na ole Cemair na -eje ozi.
Nke a bụ akara mmekọrịta mbụ n'etiti ụlọ ọrụ ụgbọ elu abụọ na mmekorita ụgbọ elu nke anọ nke Emirates na South Africa.
Ebe ọ bụ na E.mirates bidoro ụgbọ elu si Dubai na Johannesburg na Septemba, ndokwa dị n'etiti Emirates na Cemair gụnyere ịdị mma nke usoro njem otu tiketi na ntinye akwụkwọ na ibufe ebu si Johannesburg na Cape Town gaa Bloemfontein, Kimberley, Margate, Durban, Hoedspruit, Plettenberg Bay, George, na Sishen.
Adnan Kazim, onye isi azụmaahịa, Emirates Airline kwuru: “Obi dị anyị ụtọ na anyị na Cemair na -emekọ ihe ma malite nkwekọrịta anyị. Njikọ Cemair ọhụrụ ahụ na -enye ndị ahịa anyị ohere ka ha nwee ike ịga nke ọma n'ofe ọtụtụ ebe ntụrụndụ South Africa kachasị ewu ewu, na mgbakwunye na mgbakwunye nke njikọta na isi ihe Cemair rụrụ naanị Margate na Plettenberg Bay.
Ijikọ netwọkụ anyị na -eme ka nkwenye anyị sie ike inye ndị ahịa anyị ohere ohere njem, ọkachasị maka ndị chọrọ ịhụ ọkacha mmasị South Africa dị ugbu a, yana ndị njem na -akpa nkata ime njem ọhụrụ. Anyị na -atụ anya ịrụkọ ọrụ ọnụ na iwusi mmekọrịta anyị ike. ”
Miles van der Molen, onye isi na CemAir kwuru. “Obi dị anyị ụtọ na anyị na Emirates Airline na -emekọ ihe, aha ya na ịdị mma na ịdị mma. Nkwekọrịta etiti anyị na -enye ndị ahịa anyị ntụsara ahụ na ịchekwa ego dịka ha nwere ike jikọọ ugbu a site na ụgbọ elu anyị gaa na nnukwu netwọkụ ụgbọ elu a mara mma. ”
Ka anyị na-aga n'ihu na mgbasawanye anyị n'oge mgbake post-Covid anyị na-achọpụta na ugbu a karịa mmekọrịta ọ bụla bụ isi ihe na-aga nke ọma anyị. Iso ndị isi ahịa dị ka Emirates Airline na -arụ ọrụ bụ ngosipụta ọzọ nke ntinye anyị na ndị ahịa anyị inye ọrụ na uru kacha mma. ”
Ndị ahịa nwere ike debe njem ha na emirates.com, ụlọ ọrụ na -ere Emirates, na ụlọ ọrụ njem.
Emirates kwalitere ọrụ ya na/site na South Africa na mbido ọnwa a ma na -arụ ụgbọ elu 14 kwa izu na South Africa site n'ọnụ ụzọ ya Johannesburg, Cape Town, na Durban. Ụgbọ elu ahụ na -aga n'ihu na -ewughachi netwọkụ ụwa ya n'enweghị nsogbu ọ bụla, na -ejikọ ndị ahịa na site na Dubai gaa ebe karịrị 120.
Ụgbọ elu ahụ na -agbasawanye akara ya na South na South Africa site na ime ka mmekọrịta ya na mmekọrịta mmekọrịta ya na South African Airways, Airlink, Cemair na Flysafair, na -anya nhọrọ nhọrọ njikọta nke na -enye ndị ahịa ya nnukwu uru, ebe ha na -akwado mgbake nke njem na ụlọ ọrụ njem.
Ụlọ ọrụ CemAir Ltd. bụ ụgbọ elu nwere onwe nke na -arụ ọrụ na South Africa nke na -enye ebe ndị njem ama ama na obodo azụmahịa dị mkpa, yana ịgbazite ụgbọ elu ndị ụgbọ elu ndị ọzọ gafee Africa na Middle East. Ụgbọ elu ahụ hiwere isi na Johannesburg
Cuthbert Ncube, Onye isi oche nke Njem Nleta Afrịka Board nabatara mmekorita ohuru n'etiti Emirates nke dabere na Dubai na CemAir nke South Africa
Ndị Canada chọrọ ịga mba ọzọ
(MGBE) CDC wepụtara ozi ngwa ngwa maka onye America ọ bụla ...
MGM ntụrụndụ na -agbakwunye Cosmopolitan nke Las Vegas na…
Chaị! Ọ ka mma akwụkwọ ụgbọ elu Lufthansa gị site na Europe gaa ...